Xubno ka mid ah hoggaanka sare ee Xisbiga KULMIYE oo ka qayb galay Kulan lagu dardargalinayay hawlaha Xisbiga KULMIYE ee gobolka Gabiley. | KULMIYE
Xubno ka mid ah hoggaanka sare ee Xisbiga KULMIYE oo ka qayb galay Kulan lagu dardargalinayay hawlaha Xisbiga KULMIYE ee gobolka Gabiley.
Gabiley 13/05/2017, Warbaahinta Kulmiye, Wefti uu hogaaminayo guddoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed ayaa gaadhay magaalada gabiley ee xarunta gobolka Gabiley , Weftigani oo ay wehelinayeen Guddoomiye ku xigeenka labaad Axmed Cabdi dheere iyo madax kale ayaa kulan la qaatay madaxda heer gobo lee xisbiga KULMIYE.
Kulankani oo daaranaa sidii madaxda xisbiga KULMIYE ee heer qaran iyo madaxda heer gobolka ee xisbiga kulmiye u wadaagi lahaayeen xogwaraysiyada muhiimka ah ee Xisbiga iyo qaabka loo samaynayo olole bilaa turxaan ah oo nadiif ah.
Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE ee gobolka Gabiley Axmed Maxamud Shirwac ayaa madaxda xisbiga KULMIYE ee heer qaran ugu warbixiyay xaaladaha guud ee gobolka gabiley , waxaanna uu sheegay inay u diyaargaroobayaan ololaha kaadhadh qaybinta oo dhawaan ka bilaabmaysa gobolada maroodijeex iyo togdheer.
Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga KULMIYE Maxamed Kaahin Axmed ayaa uga waramay madaxda heer gobol ee xisbiga KULMIYE u qaabilsan gobolka gabiley , waxaanna uu sheegay inuu hoggaanka xisbigu diyaar sidii uu wada shaqayn dhow ula yeelan lahaa madaxda gobolka ee Xisbiga KULMIYE .
Geesta kalenna guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga KULMIYE Axmed Cabdi dheere ayaa aad ugu dheeraaday siyaabaha xisbiga Kulmiye u doonayo inuu u galo ololaha doorashooyinka ee soo socda , Waxaana uu ugu baaqay bulshada reer Gabiley inay xuska 18 may u bedelaan gurmad lagu badbaadinayo bulshada jilicsan ee Somaliland.